टमाटर को गुलाबी प्रजातिहरू सर्वश्रेष्ठ बेचिन्छ। यो आफ्नो उत्कृष्ट स्वाद कारण छ: तिनीहरू पकाउने टमाटर लागि प्रयोग गरिन्छ र pastes पूर्ण भएको गर्मी सलाद र प्लेट मा काटन रूपमा प्रभावशाली नजर पूरक ताजा प्रयोग गरिन्छ।
समूह को सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधिहरूलाई एक - टमाटर "गुलाब चमत्कार"। एक उच्च स्वाद गुणहरू भएको टमाटर को यो संकर (F1) किसिम।
को टमाटर को मुख्य विशेषता
हाइब्रिड विविधता टमाटर "चमत्कार गुलाब" प्रजनन समूह Nissa तिथि जब विकास मार्फत प्राप्त भएको थियो। आफ्नो determinant ब्रश, उच्च उत्पादकत्व देखाउँछ। रंग फल - उज्ज्वल क्रिमसन, छाला - पातलो र नाजुक, फल को औसत वजन - 300-450 ग्राम
एक झाडी उच्च बाट पैदावार - 4-6 गोलाकार फल द्वारा गठन ब्रश मा।
सुविधाहरू टमाटर गुलाबी
धेरै माली, अन्य सबै लाभ बाहेक, उल्लेख palatability टमाटर को "चमत्कार गुलाब"। यो केहि sweetish गुलाबी प्रजातिहरू मध्ये एक हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
संरक्षण लागि टमाटर शायद उपयुक्त हो, तर ताजा खपत लागि, एक सलाद वा पकाउने रूपमा - तपाईं के आवश्यक छ ठीक छ। टमाटर पालैपालो र स्वादिष्ट रस "चमत्कार गुलाब"।
दीर्घकालीन भण्डारणको लागि त उपयुक्त छैन टमाटर अन्य प्रजातिहरू गरिबी संरक्षित छन्, तुलनामा। तर स्वाद र आकर्षक उपस्थिति टमाटर धन्यवाद "चमत्कार गुलाब" सक्रिय बजार मा र पसलहरुमा खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
को वर्णन टमाटर को मुख्य लाभ - छोटो gestation अंकुरण देखि बाली पहिलो गर्न अवधि 80-85 दिन ठाँउ लिन्छ।
बढ्दो र टमाटर हेरचाह
टमाटर "चमत्कार गुलाब" को ग्रीनहाउस मा र खुला क्षेत्रमा हुर्किसकेका छन्। यो विविधता nepriveredliv, त्यहाँ गर्न कुनै आवश्यकता छ उसलाई हेरचाह गर्न धेरै प्रयास। बिरुवाहरु को सामान्य विकासको लागि पर्याप्त 2-3 पटक तान्नु shrubs छ र खनिज मल तिनीहरूलाई खाद।
यो सिंचाई मोड पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्राथमिकताको प्रत्येक पछि टमाटर संग ब्रश आसपास जमीन loosen गीला।
वयस्क बोट शक्तिशाली - एक उचाइ 115-150 सेमी को, फैलाउने, तपाईं प्रत्येक अन्य टमाटर ब्रश देखि एक दूरी मा 45-50 सेमी को मार बीच छोड्न intertwined छैन आवश्यक त पुग्न सक्दैन, प्रत्येक बोट पर्याप्त प्रकाश र गर्मी प्राप्त हुनेछ, र बाली काट्ने हुनेछ। सुविधाजनक। को बोट आफूलाई माथि गाँसिएका र चिमोटे गर्न आवश्यक छ। खैर, 2-3 बालाको गठन, उच्चतम उपज हासिल।
टमाटर "गुलाब चमत्कार" - रोगहरु को एक ठूलो संख्यामा प्रतिरोधी हो कि संकर टमाटर को क्रमबद्ध। ब्रीडर्स उसलाई भाइरस गर्न प्रतिरक्षा दिन व्यवस्थित सुर्ती मोजेक, को बिरूवा रोगहरु को बहुमत लागि विनाशकारी - प्रारम्भिक blight र लेट blight।
यो हाइब्रिड किसिमहरु साधारण तिनीहरूले बोट-आमाबाबुको भन्दा राम्रो गुण संयोजन किनभने, बलियो प्रतिरक्षा छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
टमाटर प्रजातिहरू को समीक्षा "चमत्कार गुलाब"
ब्रीडर्स भन्न कि टमाटर बीउ मा सबैभन्दा ठूलो माग "गुलाबी चमत्कार F1»। सबैभन्दा सक्रिय माली को समीक्षा यस उत्पादनको लागि आपूर्ति र माग एक व्यापक तस्वीर फारम गर्न सक्छन्।
यस्तो लोकप्रियता संग, गुलाबी टमाटर अनुभवी र साईट माली को ध्यान आकर्षित। र सामान्य मा हामी (टमाटर) ज्यादातर सकारात्मक कमाएका समीक्षा "चमत्कार गुलाब" भनेर भन्न सकिन्छ। खरीदारों बढ्दै टमाटर अनुभव सजिलै बीउ छर्न र त्यसपछि सक्षम भएका, ती बिरुवा लगाएको दर्शाउन।
टमाटर विशिष्ट "चमत्कार गुलाब"। साँचो connoisseurs टमाटर खेती लागि यो विविधता चयन, तर धेरै यस्ता "मास्को undersized", "चेरी टमाटर" वा बढी साधारण प्रजातिहरू, छनौट "एक चमत्कार नुन-कोटिंग।" कुनै पनि मामला मा वर्णन गरिएको टमाटर को आफ्नो बगैचा मा बढ्न र आफ्नो स्वाद र उपस्थिति रमाइलो गर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ।
को मास्को क्षेत्रमा अङ्गुर: सबै भन्दा राम्रो परिणाम संग बढ्दै
आफ्नै हातले आफ्नो गर्मी घरेलु मा डिजाइन बेड
ग्रेड मुला Cherriet F1: समीक्षा, खेती र बाली पैदावार को सुविधाहरू
छोएर nemophila - बीउ देखि बढ्दै
रेखाचित्र, चित्र र समीक्षा: जिग आफ्नै हातले देखे
Militarization - यो सोभियत संघ मा समाजवाद पतन लागि कारण छ
खेल कुनै मानिसको आकाश अनन्त लोड छ। के गर्ने?
रूसी रिसोर्ट्स सूची। रूस को सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट्स: समुद्र, पहाड, स्की, balneological र अन्य
DDNS सूची, सेटअप पुस्तिका
के canola तेल बनाउँछ? लाभ र rapeseed तेल को हानि
ठूलो लडाई को सैन्य ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। सैन्य इतिहास क्लब
प्रश्न गर्न सरल जवाफ: "कसरी एक्सेल मा तालिका सिर्जना गर्न?"